अक्टोबर 25, 2018 अक्टोबर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, नेपाल, लोकतन्त्र
नेपालबाट दैनिक करोडौं रुपैया बाहिर गएको छ । तर यसरी गएको रुपैयाले दैनिक देश ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आर्थिक स्थिति कमजोर हुनुमा सवैभन्दा ठूलो गल्ती कस्को ? आज कमिसनतन्त्रले देश अोरालो लाग्दैछ । कुनै पनि पार्टी सरकारमा जाने वित्तिकै पहिले सम्झौता गर्ने परम्परा लोकतन्त्रमा देखिएको छ । जबसम्म यो कुराको अन्त्य हुदैन देश अोरालो लाग्दै जानेछ । आफ्नै देशमा जडिबुटीवाट बनाएको औषधी जनताले प्रयोग गर्नसके स्वास्थ्य ठिक हुने थियो तर नेपाली समान महंगो भन्दै गुणस्तरहिन समान खान र बेच्न बाध्य पारेको देखिन्छ ।
सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन किनकि कमिसन भित्रबाट भन्दा बाहिरबाट बढी भित्रन सक्ने भएकाले नेपाली उद्योग धरासायी बन्दै गएको छ । जनताको हितमा भन्दा आफ्नै हितमा राजनीति दल लागेको वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था राम्रो हो तर यहाँ पहुँचवालाको बर्चस्व हाबी हुनाले जनताको हितमा भन्दा राजनीति दल स्वार्थमा लागेको हुनाले देश अोरालो लाग्दैछ । जब-जब स्वार्थ हावी हुन्छ तब-तब देशलाई नाफा होइन घाटाको सामना गर्नुपर्ने हुन थाल्दछ ।
फाइदा जति छिमेकीलाई खाली हात नेपालीलाई भई रहेको छ । आम्दानी कम छ खर्च धेरै छ के यसले राष्ट्रको विकास सम्भव छ । खर्च गर्दा आम्दानी नहेर्ने बानीको सुधार र उद्योगको विस्तार गर्न सके युवाको सोचलाई परिवर्तन गराई बेरोजगारको अन्त्य गर्न सके देशमा आमुल परिवर्तन सम्भव देखिन्छ । नेपाली सोझो हुनुको प्रतिफल भनेकै यही हो यही अवस्था नेपालमा विधमान रहे एकदिन देश खोक्रो हुदै जानेछ र अन्तमा जनता वाक्क भएर आउ राजा देश बचाउ भन्ने नारा घंकिन के बेर !
← हामीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउछौं
के लोभ मृत्युको कारण बन्न सक्छ ? →
जुन 7, 2019 जुन 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
3 thoughts on “नेपालमा लोकतन्त्र उपहासको संकेत”
Pingback:नेपालबाट बृद्धहरुको पलायनको खतरा बढ्दै – Science Infotech